Mampiasa zava-mahadomelina 20 ny mpanakanto iray ary mamorona sangan'asa 20 hanehoana ny vokany | Famoronana an-tserasera
Nandritra ny tantara, mpanakanto marobe no nitodika tany amin'ny zava-mahadomelina mba hitadiavana aingam-panahy sy hisolo tena ny sangan'asan'izy ireo, matetika nofonosina amina feon-tsaina. Mpanakanto marobe, manomboka amin'ny mpitendry mozika ka hatrany amin'ny mpanao sarimihetsika, no nilaza fa iharan'ny herin'ny zava-mahadomelina nandritra ny fotoana namoronany ny sangan'asan'izy ireo, maro amin'izy ireo no eken'ny besinimaro manerantany. Avy amin'ny marijuana, ampiasaina ho fomba hahitana fialan-tsasatra, hatramin'ny asidra mahery ary zava-mahadomelina izay nitondra azy ireo tamin'ny zava-misy hafa. Olana mampiady hevitra izy io, satria momba ny akora fantatry ny rehetra, manimba tanteraka ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina, na izany aza ho an'ny mpanakanto maro ny fahafahan'ny mahita sy mahita an'izao tontolo izao amin'ny fomba vaovao sy tsy fantatra dia nahavita nandresy ireo risika rehetra ireo . Ny iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny tontolon'ny zavakanto dia ny LSD, izay hatramin'ny nanamboarana azy manodidina ny 1943 ho an'ny tanjona ara-pitsaboana dia nampiasaina ho loharanom-aingam-panahy noho ny fahafahany mampifandray ireo izay mandany azy amin'ny zava-misy ary mampiditra azy ireo amin'ny dia ara-tsaina izay matetika maharitra 12 ora. Mazava ho azy, fanafody iray izay manome vokatra tsy voafehy amin'ny sehatra ara-tsaina ary na iza na iza mampiasa azy dia tsy mahalala mihitsy raha handeha hitsangatsangana amin'ny tontolo mahafinaritra sy tsara tarehy izy ireo na mifanohitra amin'ny dia ratsy, feno horohoro sy fahitana tsy mahafinaritra.
Ny tsy azo lavina dia ireo asa noforonina teo ambany fitarihan'ny LSD farafaharatsiny hafahafa sy manome hevitra, na dia tiako kokoa aza ny mitady aingam-panahy amin'ny fomba mahasalama hafa, dia tsy misy isalasalana fa ny fahalalana ny tontolon'ny hallucination sy Psychedelia eo ambanin'ny fahitana ny mpanakanto dia mahaliana. Androany aho te hizara aminareo ohatra iray an'ny mpamorona sary Brian Pollet na ilay antsoiny hoe tenany, Pixel-Pusha. Te hizaha toetra ny fetin'ny fahaizany kanto ity mpanakanto ity ary ho fanandramana dia nanapa-kevitra ny hisolo tena ny vokatry ny zava-mahadomelina izy. Niakatra ny fanamby amin'ny fihinanana fanafody 20 isan-karazany, iray isan'andro mandritra ny 20 andro misesy. Raha ny tenin'ny mpanoratra dia te-"hiteraka fotoana hananana fanabeazana mifandraika amin'ny psychedelia sy ny kanto izy."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mampiasa zava-mahadomelina 20 ny mpanakanto iray ary mamorona sangan'asa 20 hanehoana ny vokany